WAA HAWL AAN FUDUDEYN LA-DAGAALLANKA DAACUUNKA IYO JADEECADA KA DILLAACAY MAREEREY, SOOMAALIYA - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
WAA HAWL AAN FUDUDEYN LA-DAGAALLANKA DAACUUNKA IYO JADEECADA KA DILLAACAY MAREEREY, SOOMAALIYA
16.09.2011 | Dhacdooyinka
© MSF Shaqaalaha oo ka howlgalaya qeyb k amid ah isbitaalka Mareeerey ee MS
MSF waxaa ay hadda la dagaallameysaa daacuun iyo jadeeco ka dillaacay gudaha iyo hareeraha magaalada Mareerrey ee koonfurta Soomaaliya. Mareerrey iyo tuulooyinka ku hareereysan ee Jilib, Keytoy iyo Cusmaan Moto ayaa martigeliyey ilaa shan kun oo barokacayaal Soomaali ah, oo ka soo cararey iskahorimaadka iyo abaarta ka jira meelo kale oo dalkaa Geeska Afrika ku yaalla ka mid ah. Haseyeeshee, si la mid ah sida meelaha kale ee Soomaaliya ka mid ah ee uu ka shaqeeyo, ururka waxaa ku yar qaababka uu wax u qaban karo iyo xorriyad uu ku shaqeeyo, waxaana la dagaallamidda cudurrada dillaacay ay noqotey hawl culus.
Boqollaal kun oo qof oo Soomaali ah ayaa isug jirey kuwo ku qaxay dalka gudahiisa iyo qaar ka soo gudbayey xudduudaha iyaga oo ka cararaya dhibaatooyinka bani’aadamnimada ee billowdeu goor hore oo sanadkan ka mid ah. Dagaal sokeeye, rabshad, horumar la’aan, gargaar la’aan, iyo abaarta hadda jirta ayaa dadkaan ka dhigey kuwo aad u tabar-darreeyey, oo nafaqo-xumo iyo cudurro fursad-gaad ahi ay ku badan yihiin. Daacuun iyo jadeeco ayaa ka mid ah cudurrada fursad-gaadka ah ee caadi ahaan lagu arko meelaha ay isugu soo ururaan dadka tabar-darreeyey ee ay nafaqo-xumadu haleeshey, kuwaas oo nidaamyada difaaca jirkoodu ay hooseeyaan, meelahaas oo biyaha nadiifta ah ee la cabbo ay yar yihin oo xaaladaha fayadhowrkuna aaney dad ku filneyn.
“Tan iyo markii ay jadeeco ka dhex dillaacdey dadka barokacay, waxaa aan ku guuleysanney in aan dabiibno in ka badan 150 xaaladood,” ayaa uu yiri Silva Colona, oo ah Isuduwaha Mashruuca MSF ee Mareerrey. “Sida habboon waa in aan si baahsan u tallaalno dhammaan carruurta ku nool tuulooyinkaan. Taas ayaana ah sida keliya ee aan ognahay in lagu joojin karo cudurka ka dhex dillaaca dad nugul. Ilaa hadda, middaa lama sameyn; haddii uu maamulku noo oggolaado in tallaal baahsan aan ka dhex fulinno carruurta ku nool meelaha ay dhibaatadu saameysey, waan ka hortegi karnaa cudur dillaaca iyo geeri badan oo laga baaqsan karey.”
MSF waxa ay sidoo kale xarun lagu daweeyo daacuunka ka dhex sameysey cusbitaalka ururku muddo siddeed sano ah uu ku maamulayey Mareerrey. MSF waxaa ay waax lagu daweeyo daacuunka iyo xarun lagu daweeyo jadeecada ka fureysaa meel u dhow xarada dadka gudaha ku barokacay si ay wax uga qabato tirada xaaladaha cudurrada dadka ku dhacay ee kordhey. Dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafey, in ka badan 80 xaaladood oo daacuun ah ayaa la daweeyey, tiradaas oo ka badan tii qaylo dhaan laga keeni lahaa. Maaddaama uu daacuunku yahay cudur aad u faafa, waxaa lagu khasban yahay in bukaannada la karantiilo. MSF waxaa ay sidoo kale ka hortegeysaa in cudurrada ay dad kale ku dhacaan iyada oo wadda olole ay ku dhiirrigelineyso kor u qaadista nadaafadda iyo kolorriin ku daridda ceelasha biyaha.
Toddobaadkan, MSF waxaa ay sidoo kale agab gargaar u qaybisey dadka ku barokacay Jilib. Bustayaal, baaldiyaal iyo dheriyada wax lagu karsado ayaa la siiyey dad ka badan 1600 qoys oo aan haysan badi alaabada ugu muhiimsan ee guriga dhexdiisa lagu isticmaalo.
MSF waxaa ay si joogto ah uga shaqeyneysey Soomaaliya tan iyo 1991gii waxaana ay hadda daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah ku bixisaa siddeed gobol. In ka badan 1,400 shaqaale Soomaali ah, oo ay taageerayaan ku dhowaad 100 shaqaale oo Nayroobi jooga, ayaa daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, qalliin, daaweynta nafaqo-xumada, iyo sidoo kale taageero la siiyo dadka soo barokacay taas oo ah daryeel caafimaad, biyo la siiyo iyo agabka caafimaadka oo loo qaybiyo oo lacag la’aan ah ku bixisaa sagaal goobood oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku yaalla. MSF waxaa ay sidoo kale daryeel caafimaad ay siineysaa qaxootiga Soomaalida ah ee jooga Kenya iyo Itoobiya).
Tags: MSF, SOUTH